Madheshvani : The voice of Madhesh - एउटा पनि गरिब वा विपन्नलाई कुनै पनि किसिमको दुःख वा कष्ट हुन दिँदैनौं’
एउटा पनि गरिब वा विपन्नलाई कुनै पनि किसिमको दुःख वा कष्ट हुन दिँदैनौं’
मोतिलाल दुगड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री
० वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालमा फैलिन नदिन सरकारको कदम प्रभावकारी छ त ?
— वैश्विक महामारी कोरोना भाइरस नेपालमा फैलिन नदिनका लागि हामीले फास्ट ट्रयाकमा काम गरिरहेका छौं । अन्य देशहरुमा जसरी तीव्र गतिमा फैलिएको छ, त्यसमा सरकार सचेत छ । हाम्रो फास्ट ट्रयाकको काम गराइले गर्दा नेपालमा कोरोनको संक्रमण अहिलेसम्म फैलिन सकेको छैन । यो संक्रमण नफैलियोस् भनेर जनचेतना पनि फैलाइरहेका छौं । विरामीहरुलाई जाँच गरेर हामी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि गरिरहेका छौं र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि सुरक्षित साथ नेपाल फर्काउने काममा लागेका छौं ।
० तर, जनताले त्यस्तो महसुस गर्न सकेका छैनन् । राज्यविहीनताको अवस्थामा जनता छन् नि ?
— जनता अहिले राज्यविहीनताको अवस्थामा छ भने कसरी भन्नुहुन्छ ? सरकारले औषधोपचारदेखि लिएर गरीब निमुखाको खाना, कुनै पनि चीजको आपूर्तिको व्यवस्थामा कमी आउन दिएको छैन । हाम्रा खाद्य संस्थानका गोदामहरुदेखि लिएर हरेक वस्तुहरुको आपूर्ति हामीले गरिरहेका छौं । कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा हामी अभाव हुन दिएका छैनौं । यस्तो अवस्थामा सरकारको अनुभूति छैन वा सरकारको उपस्थिति देखिएन भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन । सरकारसँग सीमित स्रोत र साधनहरु छन्, तैपनि सरकारले आफ्नो तर्फबाट पूरा प्रयास गरिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कहींँ पनि हामीले कमी हुन दिएका छैनौं र जनता पनि खुशी छन् । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा ५ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमध्ये एकजना निको पनि भइसकेका छन् । यो पनि हाम्रो उपलब्धि नै हो । छिमेकी देश भारतमा हजारौं संक्रमित भइसकेका छन् र धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बचाउनका लागि भरपूर प्रयास गरिरहेका छौं ।
० दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा विपन्न वर्गसम्म तपाइँले भनेको कुरा पुग्न सकेको छैन नि ?
— हामीले मन्त्रालयबाट विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट बोलाएर राहत प्याकेजहरु नेपालभरि १० लाख मान्छेलाई बाँड्ने भनेर सुरुवात गरिसकेका छौं । पूर्णरुपमा हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ । गरिब, निमुखा र बेरोजगार भएका जनताहरुलाई एक दिन पनि भोको सुत्न नदिने हाम्रो मिशन हो । त्यसका लागि हामीले हरेक नेपालीहरुका लागि हरेक किसिमका सेवा, सुविधा र सहयोग दिन तयार छौं । कोही विरामी छन् भने घर–घरमा गएर उपचार गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइरहेका छौं । लकडाउनको अवस्थामा पनि हाम्रा कार्यकर्ता, स्वयम्सेवकहरु घर–घरमा पुगेर सेवा दिइरहेका छन् ।
० तर, ग्राउण्ड लेवलका जनतासम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने गुनासाहरु पनि त छन् ?
— ग्राउण्ड लेवलका जनतासम्म सेवा सुविधाहरु पुगिरहेका छन् । म मन्त्री भएर झुठो बोलेको छैन । तपाइँहरु आफै गएर रिपोर्टिङ्ग गर्नुस् । हामीले एउटा गरिब वा विपन्नलाई पनि कुनै पनि किसिमको दुःख वा कष्ट हुन दिँदैनौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र हामी त्यसैमा लागेका छौं ।
० अहिले टोल–टोलमा सरकारको उपस्थिति छ, तर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको मुख ताकिरहेका छन् भने प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको । तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य वा समन्वय देखिएको छैन नि ?
— अहिले सरकारको आलोचना गर्ने बेला होइन । हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले हामीले विपन्नहरुको घर–घरमा राहत पु¥याइरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर वडा–वडामा गएर सामग्रीहरु पु¥याइरहेका छौं । यस्तै, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सबै प्रदेशहरुमा आइसोलेशन बनाउने, क्वारेन्टाइन बनाउने, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था गरिदिने, अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सुचारु राख्ने लगायतका कामहरु हामी गरिरहेका छौं । हामीबीच राम्रो समन्वय र सहकार्य छ ।
० अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट) छैन, किटहरु पनि उपलब्ध छैन भन्ने गुनासाहरु आइरहेका छन् नि ?
— हामीसँग किटहरु पर्याप्त मात्रामा छन्, केही स्वास्थ्य सामग्रीहरु कम थियो । त्यो पनि हामीले चीनबाट मगाइसकेका छौं । केही किट र स्वास्थ्य सामग्रीहरु भारतबाट पनि आएको छ । हामीसँग थर्मल गन, पीपीई, भेन्टिलेटरहरु पनि पर्याप्त मात्रामा छन् । अहिले केही पनि कमी छैन । कुनै पनि ठूलो समस्यासँग जुध्न हामी तयार छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर आएका छौं । विदेशबाट आउने नेपालीहरुका लागि हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौं, उहाँहरुलाई कम्तीमा दुई हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
० मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारले केही विशेष प्याकेज घोषणा गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो केही देखिएन ?
— सरकारले राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरेको छ । मेरो संयोजकत्वमा पनि एउटा आपूर्ति र राहत व्यवस्था गर्ने समिति बनेको छ । जनतालाई कुनै पनि चीजको अभाव हुन नदिने र उद्योगधन्धाहरु पनि सुचारु राख्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । यो सँगसँगै हामीले राहत वितरण गर्ने कामलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले निरन्तरता दिइरहेका छौं । अहिले ठूलो आर्थिक मन्दी आउने अवस्था देखिएको छ, त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले एउटा राहत प्याकेज ल्याएको छ ।
० अहिले २५ गतेसम्म तोकिएको लकडाउन फेरि लम्बिन सक्छ कि ?
— यस विषयमा अहिले हामी केही भन्न सक्दैनौं । यो संक्रमण भारतमा यदि उग्ररुपमा फैलियो भने लकडाउनको अवधि लम्बिन पनि सक्छ । हामी अहिले सुरक्षित छौं, हामी धेरै आतिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, सतर्क र सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता छ । भारत र नेपालको खुला सिमाना छ, निर्वाधरुपमा आवत जावत हुने गर्छ । त्यसैले, यदि भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भयो भने २५ गतेसम्म नै रहन्छ ।